Uchwepheshe we-Semalt Ucacisa Amathiphu a-Anti-Malware
I-Malware ibhekisela kuwo wonke amafomu esofthiwe esiyingozi efika ohlelweni lwekhompiyutha ngokuvamile ngaphandle kolwazi lomnikazi. Ama-virus, i-adware, ne-spyware yizinye ze-malware ezivame kakhulu. I-Malware ingaphazamisa noma iphuze imisebenzi yekhompuyutha, ibambe imininingwane, ivumele ukufinyelela okungagunyaziwe ezinsizeni zesistimu, kubangele ukushaywa noma ukuqhwaza njalo, nokunye ukuphazamiseka.
Abalobi be-Malware bavame ukukhohlisa abasebenzisi ekulandeni amafayela angalungile, yingakho iningi lezinhlelo ze-malware lingena emakhompyutheni engabonakali.
Kubalulekile ukuthatha izinyathelo ezidingekayo zokuthola i-malware futhi uyivimbele ekutheleleni nasekulimazeni uhlelo lwakho.
UJack Miller, iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Semalt , uchaza izindlela ezithembekile zokwenza lokhu:
1. Sebenzisa i-anti-virus yamanje kuze kube yilapho bese usebenzisa ama-patches
Lokhu kungenye yezenzo ezibaluleke kakhulu wonke umnikazi wekhompiyutha / umsebenzisi okufanele ayenze ukuze agcine amakhompyutha abo avikelwe ukutheleleka kwe-malware. Njalo sebenzisa ukuvikelwa kokulwa ne-anti-virus futhi uphinde ufake izinhlelo ze-software kanye nama-patches ngokushesha nje lapho ekhishwa.
Ukusebenzisa ukuvikelwa kokulwa negciwane olusha kuyasiza ukugwema "ukushayela" ngokulandwayo - izikripthi kumawebhusayithi angalungile agijima futhi afake i-malware ngasese.
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuthi akuyona yonke imithombo ye-patches nezibuyekezo ezithembekile. Qinisekisa ukuthi uthola izibuyekezo zesofthiwe yesicelo kusuka kubahlinzeki abakhulu njenge-Microsoft, i-Apple, i-Adobe ne-Java.
2. Ungachofozi izixhumanisi noma izinamathiselo kuma-imeyili asolisayo
Ama-imeyili asetshenziselwe ekusakazeni i-malware isikhathi eside. Ngokuvamile, i-imeyili esetshenziselwa le njongo izoqukatha amafayela we-malware njengenamathiselwe. I-imeyili ingase inikeze isixhumanisi esikuyisa kuwebhusayithi bese uzofaka ngesandla ngokuzenzakalelayo ukufaka i-malware noma wenze i-"drive-by" ukulanda. Ukugwema i-malware ethunyelwe nge-imeyili:
Ungachofozi izixhumanisi noma okunamathiselwe kwe-imeyili okuvulekile uma i-imeyili ivela kumthombo ongaziwa noma ongathembeki..
Ngisho noma uyazi umthombo kodwa i-imeyili ibheka okusolisayo, qala uxhumane nomthumeli futhi uqinisekise ukuthi okunamathiselwe noma isixhumanisi siseduze.
Akukaze kuvuleke okunamathiselwe kwe-imeyili okuphelile nge .bat, .exe, .vbs, noma .com.
3. Qaphela izindlela zokuxhumana zenhlalo
Ubunjiniyela bezenhlalakahle yindlela esetshenziselwa ukukhohlisa umuntu ukuthi athathe isenzo. Akuyona into embi ngokusho kwayo, kodwa abakhiqizi be-malware bangayisebenzisa ukusabalalisa izixhumanisi ezinonya. Ngokuvamile zisebenzisa izindlela ezahlukene zokubamba iqhaza bese uchofoze isixhumanisi kwiwebhusayithi enonya. Uma usuvakashele isayithi, i-malware ifakwe ohlelweni lwakho.
Ezinye zezindlela zokuxhumana zenhlalo ezithandwayo zifaka:
Xhumanisa ukuxhuma - ukuhlinzeka abalingisi ukukhiqiza inzalo kokuqukethwe okuhlinzekiwe
Izixwayiso ze-popup - ama-popups azokutshela ukuthi idivayisi yakho inenkinga nokuthi wena ukuyilungisa, kufanele uchofoze isaziso. Isixhumanisi singaholela ekufakeni isofthiwe (okuyi-malware). I-"drive-by" yokulanda ingabuye iqaliswe ngokuqapha kwepopop.
Abadlali beMediya - i-malware ingasakazwa nabathengisi bezindaba ngale ndlela: mhlawumbe uye wavakashela iwebhusayithi futhi wathola ividiyo ethakazelisayo. Kodwa ukuze udlale, iwebhusayithi ikutshela ukuthi kufanele ufake isofthiwe ethile yomdlali wesidlali. Noma kunjalo, ngomqondo wangempela, uzobe ufake i-malware.
Ungazigwema lezi zindlela ngokuchofoza nje noma ukubandakanya noma yiliphi iwindi le-popup elivela. Futhi isofthiwe yemidlali yemidiya, kungakhathaliseki ukuthi iheha kanjani ividiyo, ungalokothi ufake isofthiwe ephakanyisiwe lapho. Ukugcina idivayisi yakho ivikelwe, njalo ufake isofthiwe kumawebhusayithi athembekile.
4. Sebenzisa izinhlelo zokwabelana ngefayela ngokuhlakanipha
Amafayela okwabelana ngamawebhusayithi nezinhlelo zingaqukatha i-malware. Ungakwazi ukufaka i-malware ngokungazi uma ufaka uhlelo lwe-Peer-to-Peer (P2P). Futhi, ungathola i-malware efihliwe njengevidiyo noma ifayela lomculo lokulanda.
Njalo qiniseka ukuthi noma iyiphi isofthiwe ye-P2P ofuna ukuyifaka iqinisekisiwe i-malware. Futhi, akufanele uvumele ukulayisha kwe-P2P noma uvule noma yiliphi ifayela elilandiwe ngaphambi kokulikhipha kuma-virus.
Abakwa-Cybercriminals bazohlala beklama isofthiwe engozi futhi bayisakaza ukuze bafeze izinjongo zabo ezinonya. Wonke umuntu kudingeka ahlale eqaphile ngokulondoloza izinhlelo zabo.